Xasaasi Dhageyso: Alshabaab oo Fal Arxan Daro ah ka geestay Deegaanka Ceel-cali oo Shalay ay la Wareegeen | Kismaayo24 News Agency
Xasaasi Dhageyso: Alshabaab oo Fal Arxan Daro ah ka geestay Deegaanka Ceel-cali oo Shalay ay la Wareegeen
Wednesday October 12, 2016 - 10:04 under Somali News by Tifaftiraha K24
Sida ay sheegayan Wararka aynu ka heleyno Deegaanka ceel-cali ee Gobolka Hiiraan Dagaalyahanada Alshabaab ee Shalay Deegaanka la wareegay ayaa la sheegay in Halkaasi ay ku Gowraceen Nabad-doono iyo Ganacsato Magaalada Caan ka ah.
Ganacsatada Al-shabaab la sheegay in ay ku Gowracen Degaanka Ceel-cali ayaa la sheegay in lagu kala Magacaabo Maxamed Birqaad,Maxamed Cismaan Aadan iyo Aadan Maxamuud Cabdi.
Sidoo kale waxaa kamid ah Dadka halkaa la sheegay in Al-shabaab ay ku Gowraceen Labo Nabaddoon oo si weyn looga yaqaanno Degaanka Ceel-cali.
Shanta Ruux ee Shabaabku dileen ayey ku Eedeyeen in ay Macaamil la lahaayeen Ciidamadii Itoobiya ee Shalay ka baxay Degaankaas.
Sidoo kale Waxaa la sheegaya in Al-Shabaab ay xireen ku dhawaad 50 qof oo ka mid ah dadka deegaanka , kuwaa soo lagu eedeeyay in xiriir la leeyihiin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka dowladda Itoobiya oo shalay ka baxay deegaanka Ceel Cali.
Deegaanka Ceelcali ayaa ah deegaan muhiim ah waxaana uu magaalada Baledweyne u jiraa 75 km dhanka Galbeed.
Mid ka mid ah Nabad-doonada ku sugan Ceel Cali oo warbaahinta la hadlay Isagoo ku sugan guri ku yaala Magaalada oo sida uu sheegay in laga soo bixi karin ayaa waxa uu xusay in Shabaabka soo galay Ceel-cali ay gaaraya ku dhawaad 2kun oo Ciidan oo isugu jira Soomali iyo Ajaanib.
Halkaan Hoose ka Dhageyso Wareysiga Nabad-doonka